Ibhinqa lithanda indlebe, kodwa indoda .... Ngamanye amehlo?
"Akunjalo!" - Abasetyhini abahlakaniphile baya kukuphendula, ngubani olula kwaye odlalayo, nangaphandle kokuzikhangela, uzuze uthando kunye nenkathalo yabantu.
"Akunjalo!" - kunye neengqondo zeengqondo, ezijongene nemibandela yokwahluka kwesini ...
Thina, bafazi, sisoloko sisazi kakuhle ukuba umntu uyintoni: omeleleyo, onokuzithemba nokuzimela. Ngoko, akukho nto yokuthetha ngayo, ukuvelisa ukuncoma kunye nodumo kuyo yonke into. Apha siphosakele ... Abasetyhini abanezixhobo zokuzimela ukuba indlela eya entliziyweni yabo iphela "ngeendlebe," oko kukuthi, ngokuncoma, ngesizathu esithile bayaqiniseka ukuba amadoda angenalucalulo ngokupheleleyo. Enyanisweni, amadoda angama-99 kwi-100, kungakhathaliseki ukuba bazithembele njani, kwinqanaba elincinci lilambile ukufumana imvume yethu.
Kodwa, ukuba ngababhinqa isisombululo esongezelelweyo sokubonisa, ukucokola amagama ambalwa athetha ngokuthandwayo, ngoko ke amadoda angesizathu sokuthatha isenzo. Kwaye apha ukuncoma kuzuza amandla angumlingo. Awudingi nayiphi na intando yothando kunye neengqungquthela: ukuncoma okufike ngexesha kunye nokwenzelwe kakuhle kunokwenza i-UVolnya yokugqibela i-Terminator kunye no-Don Juan ongapheliyo. Yaye yonke into yokuba amadoda ethu anamandla akakwazi ukuhlala ngaphandle "kokusondla" ukuvunywa kwethu kunye nokunyaniseka. Ngaphezu koko, ukuncoma akunjalo. Kuphela nje ukunyanzeliswa kwezici. Okanye inyaniso enenzuzo, yaxelelwa ngexesha.
Ngokukhawuleza uthi ukuncoma - uhlobo lwesayensi. Masithi umntanakho akanako ukusombulula ingxaki elula kwi-physics nayiphi na indlela. Usabela njani? Ngokuqinisekileyo unjalo: "Kutheni uyisidenge, awukwazi ukwenza nantoni na?". Kwaye ungatsho ngokungafaniyo: "Ukudanisa, unengqiqo kum, le ngxaki iyinto engumzekelo kuwe." Zama kwakhona, kufuneka uphumelele. " Kwaye oko kuvela. Kuyafana nabantu. Okanye uthi: "Hayi, kufuneka ukuba, uqikelele phansi ekhitshini ukuba uhlambe" okanye "Hayi, yintoni intshwankqayo endiyenayo kum, ndandicinga nje, kwaye sele uyenzile!" Ngaba uziva umehluko?
Kubaluleke kakhulu ngetoni enokuyincoma. Ukulumka ngokunyanisekileyo kwengane kubonwa kakhulu ngabantu ngokuncinane, umzekelo, ilizwi elincincileyo lenzelwe yena yedwa.
Akunjalo nantoni na akuvumelekanga kunye nengqiqo apho thina besifazane asiqondi isizathu sokuba sivame ukufakazela indumiso ebhekiswe kubathandekayo. "Ndoda, andiyikrokreli ukuba uyilungele ukuphatha imithwalo yokuloba: udonga luphelele kwaye imingxuma ikhona kwaye iminwe iyanamathela!". Ngaba uthanda ukuncoma okunjalo? Vumelani ukuba kweli fomu sele lifana nento echasene ngqo.
Enye impazamo eqhelekileyo: amaninzi amaninzi ahamba ngapha nangaphezulu ngokuncoma, ahlambulule ngaphandle nangaphandle. Mhlawumbi, zikhokelwa ngenye imigaqo emibini: nokuba "awukwazi ukuphazamisa i-porridge ngeoli", okanye "umhlobiso ongcono kakhulu wendoda unamathothoza ezindlebeni". Zomibini ezi zilandelayo, mhlawumbi, ziyinyani nganye, kodwa kuphela ayisebenzisayo kwiincoma. Bamele bathethe kuphela ngenxa yeso sizathu. Ngaphandle koko, othandekayo (ukuba, ngokuqinisekileyo, akayiyo isilumko esisijikelezileyo) kungekudala uyayeka ukuyikholelwa kwaye udumo luya kulahla amandla akhe omlingo.
Ukuncoma "okwenziwe" akubi buhlungu ukumazi imvelo nemikhwa yomntu ekujoliswe kuso. Kubaluleke kakhulu ukuzimisela wena, ukuvavanya kweziphi iimpawu ezibaluleke kakhulu kule ndoda ethile. Mhlawumbi, ukubethela isikhonkwane - kuye into evamile kunye nesiko. Kodwa kwi-design design, ayengenamandla kakhulu, kwaye ukuba uyifumene impumelelo yakhe kule ndawo ibaluleke kakhulu kuye. Kodwa kukho iipatheni jikelele. Umzekelo, nakubani na umntu, kubaluleke kakhulu ukuvavanya iimpawu zakhe zobungcali. Okanye isondo (kodwa ngoku, mbulela uThixo, abafazi ngokwabo kwaye baqikelele!). Yaye, yithi, ukukwazi ukupheka kakuhle - hayi. Ngoko ke kutheni uncomele ngenxa yokuba ungatshitshisi amaqanda, ukuba unokufumana enye incomo. Ngokomzekelo, ukuba uyisilumko, unjani uhlobo lwezandla enegolide, njl njl.
Amadoda athetha ukuncoma kwintombazana malunga nobuhle bakhe, ukukwazi ukupheka, ukufumana iindwendwe, ukuvelisa iintyatyambo, oko kukuthi, kumdumise ngenxa yeempawu zowesifazane. Ngoko thina, bafazi, simele sikhumbule: ukuncoma kwendoda kufuneka kwenziwe kuphela ngokuvavanya iimpawu zakhe. Abo baqhelekileyo babonwa njengendoda. Ngendlela, ukuncoma kungenziwa ngaphandle kwamagama, ngokungabonakaliyo. Kwanele ngexesha elifanelekileyo nje ukuchukumisa izandla zomntu obathandayo okanye ukumjonga ngendlela ekhethekileyo, ukumncuma ... Ewe, le arsenal ibhetele kubasetyhini, akunjalo?
Ngaba ufuna ukujonga ukuba intanda yakho injani? Emva koko umenze uncome ngokukhohlisa. Indoda engummangaliso, olungeleyo ngokuhlekisa, mhlawumbi uphendule imali enye. Ukuba uthe wuleza, uqonde kwaye ubona ubomi obumnyama nomhlophe, ngoko ngokuqinisekileyo uya kuthukuthela ukuba "uphoswe ngesidenge." Ukuba umthandi wakho wayevuyiswa ngokunyanisekileyo ngokuncoma kwakho, ngoko ... Kukho izigqibo ezininzi, zikhethe naziphi na zazo.
Kodwa ngokubalulekayo: ebomini kukho ixesha elininzi apho unako kwaye kufuneka udumise umthandayo. Kwaye into eyona nto kukuba akudingeki ukuba uvelise nantoni na, kwanele nje ukwenza kube mnandi! ..
Indlela yokwenza ibhinqa likuthande?
Yintoni ekubonweni kwamadoda yinto ebalulekileyo eluthandweni
Yintoni eyoyikisa amadoda? Phobias kunye noyiko
Ootata abangabodwa kunye neempawu zabo
Indlela yokugcina umntu weCapricorn
UGarcinia eCambodia - indlela yokunciphisa umzimba
Ukuzivocavoca kwisisu esezantsi
I-coat oatmeal eneepistachios
Umzimba womntu ukhusela njani uxinzelelo?
Indlela yokwenza umkhonto wesiFrentshi